Ezona fonti zi-8 ziBalaseleyo zokuchwetheza | Abadali be-Intanethi
Nangona baye bayeka ukusetyenziswa kwiminyaka embalwa edlulileyo, kusekho i-melancholies abafuna ukuphinda babhale umatshini wokuchwetheza, kungekhona nje njengento yokuhlobisa, kodwa njengento yokuzonwabisa, apho ukubuyisela umatshini kwaye uyisebenzise.
Ukucofa isitshixo ngasinye bekuyinzame abaninzi abayilwayo abaqala ngoku kwihlabathi loyilo abanakuze bayonwabele. Kwaye yiloo nto, i-typography yomatshini wokuchwetheza yinto eyimfuneko xa uyilwa, kuxhomekeke kwiziphi iitekisi.
Abaqulunqi abaninzi, abanakho ukufikelela koomatshini abanjalo, kufuneka bafumane uhlobo oluchanekileyo olugcina isiseko somatshini wokuchwetheza, wakudala, yiyo loo nto namhlanje siza kuqokelela ukhetho lweyona nto ilungileyo. iifonti zomatshini wokuchwetheza.
1 Ziziphi iifonti zomatshini wokuchwetheza?
2 iifonti zomatshini wokuchwetheza
2.1 Umatshini wokuchwetheza waseMelika
2.3 Lucida umatshini wokuchwetheza
2.5 Ofisi Sans
2.6 Ithisisi yokuchwetheza
2.8 Umatshini wokuchwetheza ocinyiweyo
Ziziphi iifonti zomatshini wokuchwetheza?
Ifonti yokuchwetheza, okanye njengoko yaziwa, ifonti yokuchwetheza, yenye ye isetyenziswa kakhulu xa kusetyenzwa kuyilo lwakudala. Nangona oomatshini bokuchwetheza kudala bephumile kwizitudiyo zokuyila, baninzi abathandi bolu hlobo lokubhala.
Kukho iifonti ezininzi zokuchwetheza, oko kukuthi, nganye kuzo inomahluko. Uhlobo lochwethezo olusetyenziswa ngokubanzi ukulinganisa uhlobo lodidi lokuqala lu i-typography ene-classical, inkangeleko egugileyo, kunye nentwana yokuthungwa.
Luhlobo oluchwethezayo olunenkalo enye efanayo, nangona luguquguqukayo, lune- ububanzi obufanayo nobuqhubekayo phakathi kweentonga kunye neeserif. Njengoko besesitshilo, ezi ntlobo zochwethezo ziphefumlelwe ngoomatshini bokuchwetheza bakudala.
Ngaphambi kweekhompyuter, kwakuxhaphake kakhulu ukuchwetheza ukunxibelelana, nokuba yeyomntu kunye neeleta zeshishini, izimemo, izaziso, njl. Namhlanje, ukusetyenziswa kwayo kukhawulelwe kwixesha loyilo yencwadi yezihloko, okanye xa ufuna ukunika isiqwenga somzobo isimbo esisesikweni okanye samandulo.
iifonti zomatshini wokuchwetheza
Okulandelayo, siza kukubonisa a ukhetho lweefonti ezahlukeneyo zokuchwetheza ukuze ube nezalathisi ezahlukeneyo kwikhathalogu yakho yokuchwetheza.
Umatshini wokuchwetheza waseMelika
Kuvela ngo-1974, ezandleni zikaJoel Kanden kunye noTony Stan, owadala le alfabhethi exelisa iifonti ezisetyenziswa ngoomatshini bokuchwetheza. Idibanisa ukuqina kohlobo oludala kunye nesitayile sangoku kunye nesangoku.
Idalwe nguHoward G. Kettler ngo-1995 kwi-IBM, iCourier typeface Yenye yezona zaziwa kakhulu ehlabathini. Yayilucweyo olwaluza kulungiselelwa oomatshini bokuchwetheza, yiyo loo nto abalinganiswa bayo behlala kububanzi obufanayo, kwaye kungenxa yesi sizathu ke ukuba imigca yokubhaliweyo ebhalwe ngolu chwethezo ingabikho linye, oko kukuthi, unobumba m, unobumba obufanayo. isithuba esifanayo nonobumba u-i, umzekelo. Oku kungafezeki koko kwenza i-Courier typeface yaziwe kakhulu kwihlabathi loyilo kwaye isasetyenziswa nanamhlanje.
U-Adrian Frutiger uyilwe ngokutsha kamva kwi-IBM Selectic Microsoft ukuze ikwazi ukusetyenziswa kwiwebhu. Yifonti esele ifakwe kuzo zombini iiMacOs kunye neeWindows.
Lucida umatshini wokuchwetheza
ULucida Typewriter, ngowentsapho yakwaLucida. Yenziwe nguCharles Bigelow kunye noKris Holmes ngo-1985. Olu chwethezo lwaluyenye yodidi lokuqala lomatshini wokuchwetheza wedijithali.
Olu chwethezo lunayo utshintsho oluncinci kunye olufihlakeleyo lobunzima kwiimpondo zayo kunye nokufundeka okukhulu. Lulwimi olunzima kodwa olucacileyo xa ulufunda.
Omnye wemisebenzi kaNils Thomsen yokuchwetheza. IComspot izama ukubuyisela iindlela zakudala zoomatshini beefonti zokubhala ezindala, kodwa ukuziqhelanisa nokuchukumisa komntu.
Yayilwa ngo-2015 njengendawo yokuchwetheza yeComspot, ihardware kunye nosasazo lwesoftware. Ngokomgaqo, iipesos ezintathu kuphela ezaziyimfuneko, kodwa zandiswe zaya kutsho ezilithoba, ukuze zisetyenziswe ngohlelo. Ezi iintsimbi ziphefumlelwe yimbali yenkampani, ekuqaleni, iikhowudi zokucwangcisa.
Yayilwa ngo-1990 ngu-Erik Spiekermann. I-Ofisina Sans yi-typeface yayo Injongo yayikukunxibelelana ngokufanelekileyo kwiifom zeenkampani kunye neeofisi. Ngesitayile esisekwe kwiifonti zoomatshini bokuchwetheza bakudala kodwa ngomoya wale mihla kunye nobuchwepheshe.
Ifonti yeOfisina ineentsapho ezimbini; i-Ofisina Sans, ngaphandle kokugqitywa kunye ne-Offica enokugqibela. Ekuqaleni, ukusetyenziswa kwiiofisi, kwakunepesos ezimbini kuphela, kodwa njengoko iye yaguquka ekusebenziseni kwayo imikhankaso yentengiso, kuye kwafuneka ukuba yongeze ubunzima bayo. Yi i-typography efundekayo kakhulu ngenxa yezithuba zayo, ubude be-X yayo kunye neemilo zayo.
Kukuchwetheza okuhlawulelwayo, kwaye lukhetho oluhle kakhulu xa ukhangela iifonti zomatshini wokuchwetheza. Ithisisi yokuchwetheza iye amatye obunzima amathathu ahlukeneyo, akhaliphileyo, aqhelekileyo, kunye nowesithathu kuthiwa udiniwe, yeyona nto inomdla kwisithathu kuba inika iileta ukuthungwa, ibanika isimbo sakudala.
Umyili we-typeface kaGareth Hague, ngumyili we-Aminta, uhlobo lochwethezo idibanisa ngendlela eyiyo, isitayile sakudala soomatshini bokuchwetheza bakudala, kunye nomoya wale mihla Helvetica typeface.
Ukusondela phakathi kwabalinganiswa bayo kusenza ukuba si-teleport kwaye kubonakala ngathi sicinezela nganye yezitshixo zomatshini wokuchwetheza.
Umatshini wokuchwetheza ocinyiweyo
Iyilwe ngumchwethezi u-Paulo W. Ucimiweyo wokuchwetheza 2 yi ifonti yomatshini wokuchwetheza kwisimbo sonxunguphalo, eyenza imvakalelo yohlobo lomatshini wokuqala. Le fonti inobunzima obune ukwenza uyilo lwethu, oluqhelekileyo, olunesibindi, olukekeleyo kunye ne-score.
Umatshini wokuchwetheza ungomnye we izixhobo zokuchwetheza zakwangoko. Ngubani ongasikhumbuliyo isandi sihlandlo ngasinye kucofa isitshixo, nomgudu obandakanyekileyo ekucofeni iqhosha ngalinye ukuze unobumba ahlale eshicilelwe ephepheni. Kunzima kakhulu ukukuva nokuva oku kwakhona, kodwa enkosi kubachwethezi abayila iifonti eziphefumlelweyo ngoomatshini bokuchwetheza singakwazi ukusiphinda esi simbo sakudala, singabuyela kuloo maxesha.
Ukuba nekhathalogu yeefonti zomatshini wokuchwetheza yinto eyimfuneko xa uyilwa, ukugcina loo nto indala, isimbo esibonakalayo esixineneyo nesinxibileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Ezona fonti zisi-8 ziBalaseleyo zokuchwetheza
Imizekelo emihle yokupakisha yokudala